Fifandirana tany atsimon’i Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Fifandirana tany atsimon'i Thailandy
Voadika ny 09 Novambra 2018 12:43 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Aprily 2005 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Niakatra ny tahotra raha naharitra 15 volana ny korontana niely tany amin'ny faritany atsimon'i Thailandy.
Nanjary faritra somary saropady ny faritra tany amin'ny sisintany Maleziana satria nahitana ireo hetsi-panoherana Miozolomana mikatsaka ny fahaleovantenan'ny faritra manohitra ny governemanta Bodista maro an'isa. (Jereo ny Pikan-tsary eto , eto , eto ary eto .)
Misy ny bilaogy nosoratan'i Sittha Lertphaiboonsiri izay manolotra ny fomba fijery miabo ho an'ny mpanara-maso Thailandey. Conflict in the South of Thailand (Fifandonana ao atsimon'i Thailandy) no anarany ary ao amin'ny ForumAsia ao Bangkok no ahitana azy . URL:
which will be re-routed to:
izay hitondra indray mankany amin'ny:
Mifandray amin'ny Oniversite Thammasat i Sittha. Miteny tsara ny fiteny Bahasa Indoneziana izy – miaraka amin'ny lantom-peo – ary nanome anarana Indoneziana ho an'ny tenany. Sady Shinoa, no Katolika no Thailandey izy .
Kandidà tsara ho an'ny famahanana bilaogy mpampifandray izy .